600 -CLASS PINTLE CHAIN ​​- onye na -emepụta ike nnyefe Singapore pte ltd
600-KLAS PINTLE CHAIN
600 Klas PIN PIN
Agbụ ígwè pintle anyị dị narị narị isii na-enye arụmọrụ dị mma, ike, na ịdị ike ma e jiri ya tụnyere ụdọ pintle metal klaasị 600 ndị ọzọ. Anyị na -enye ha abụọ mbubata na nke emere n'ụlọ n'ime ụdị Usa nke ụdọ ndị a. Ndị a bụ ụdị ụdọ pintle a na -ejikarị arụ ọrụ n'ihi na ha na -enye ike dị elu na arụ ọrụ ogologo oge. A na -achọpụtakarị ụdọ ndị a na ebumnuche ọrụ ugbo, ndị na -agbasa ájá, ndị na -agbasa nsị, ndị na -agbasa nnu, ndị na -ebuga ya, ndị na -ewe nri, ndị na -ebu akpa, na -adọkpụ ala ala, na ọtụtụ ebumnuche ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ mgbakọ na -adọkpụ zuru ezu yana mgbakwunye ma ọ bụ slats anyị nwere ike ịnye ndị mmadụ n'otu n'otu, anyị na -echekwa ihe nrịbama pintle 600, ihe mgbakwunye, na ndị na -emebi ihe.
Ihe Ntuzi Chain nke 600-Class Pintle:
Akụkụ ejiri aka na-ekpo ọkụ nke ọma
Mepee nhazi gbọmgbọm
Ndepụta Ngwaahịa 600-Course Pintle Chains
Ike Kasị Elu
Akụkụ Sidebar (B)
Okegbe Sidebar (C)
Pin dayameta (D)
2.313 ″ iri na anọ, 000 LBS 0.875 ″. Otu narị na iri abụọ na ise ”.312 ″ otu. Iri na asaa LBS/ FT
abụọ.250 ″ 23,000 LBS 0.938 ″ .a narị na iri asaa ".437 ″ 1.86 LBS/ FT
2.250 ″ 28,000 LBS 1.050 ″ .225 ″ .465 ″ two.eight LBS / FT
abụọ.250 ″ 20,600 LBS 0.937 ″ .a narị na iri asaa ”.375 ″ otu.
2.609 ″ 29,000 LBS 1.063 ″. Narị abụọ ”.437 ″ abụọ.3 LBS/ FT
abụọ.609 ″ 38,000 LBS 1.138 ″ .252 ″ .500 ″ 3.32 LBS/ FT
3.075 ″ 52,000 LBS 1.500 ″ .315 ″ .625 ″ five.65 LBS/ FT
4.000 ″ 50,000 LBS 1.500 ″ .310 ″ .625 ″ 5. ise LBS/ FT
Gaa leta anyị ugbu a http://agricultural-gearbox.xyz/chains/rail-clip-film-stainless-steel-chain.html iji mụta ihe ọzọ ị kwesịrị ịghọta gbasara yinye ihe nkiri.